Ngokwelungelo elilodwa lomenzi wechiza, Ipensile yesi-2 ka-Apple inokuba ne-ID yesazisi | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | Izaziso
Izolo, iApple yanikwa patent, Inesihloko esithi "iStylus eSmart" enecebo elinokuthi libe yi Apple Pencil, isincedisi esinye sePad Pro esaziswe nguApple ngoSeptemba 2015 okanye ngoMatshi ophelileyo. Phakathi kweeyantlukwano ezinengqiqo, iisenzi ezintsha kunye neentloko ezingaguquguqukiyo, ezinokwenza istylus (arg! - Steve Jobs) isixhobo esinamandla ngakumbi nesichanekileyo kunanamhlanje.
Ipensile ye-Apple yangoku isebenzisa isivamvo soxinzelelo kunye neenzwa zokuchonga amandla kunye notyekelo esilusebenzisayo. Ukongeza koku, iintloko eziguqukayo echazwe kweli patent iya kuvumela ukuzoba nokubhala ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokutsho kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza, nganye yezi ntloko inokubandakanya iikhowudi ezizodwa eziya kuvumela ipensile ye-Apple ukuba ibone ukuba yeyiphi na ebisetyenziswe nangaliphi na ixesha ukutshintsha imveliso yesixhobo ukuze ilingane neempawu.
Ipensile ye-Apple eneTouch ID?
Isixhobo esivelisa le patent sinee-sensors ezininzi kunePensile ye-Apple eyaboniswa ngo-Septemba, eyayiza kuyivumela ngqo ngakumbi uxinzelelo lokufunda, isikhundla kunye nokuziqhelanisa. Ukongeza, yongeza inqaku lokhuseleko: a IDA. Ukuze ufunde iminwe kwaye ugcine ubungakanani besitayile, iya kuba yiPad Pro enokufunda ulwazi isebenzisa iBluetooth.
Ilungelo elilodwa lomenzi lifakwe ngo-2011, kodwa alizange linikwe i-Apple kude kube izolo. Ukuba asijonganga kumzobo welungelo elilodwa lomenzi, sinokucinga ukuba akukho ngqiqweni ukutshintsha iintloko zidwebe ngeendlela ezahlukeneyo, kuba oku kunokwenziwa ngesoftware, kodwa kumzobo siyabona ukuba kukho intloko engqonge isivamvo sokuchukumisa, a intloko ngekhamera enyeInzwa yokujikeleza enye ikhuphe ukukhanya.
Ipensile ye-Apple sisixhobo esibhaliweyo esingenakutsho ukuba sinokufikeleleka kakhulu, ke kunokuba sengqiqweni ukubeka i-ID yokuChukumisa kuyo ethintela umntu ukuba ayisebenzise ukuba siyaphulukana nayo. Ngayiphi na imeko, sithetha ngelungelo elilodwa lomenzi kwaye ayizizo zonke ezifumana ukukhanya. Njengesiqhelo, ukuphuma kwamathandabuzo kuyakufuneka silinde iinyanga ezininzi okanye iminyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ngokwelungelo elilodwa lomenzi wechiza, i-Apple Ipensile yesi-2 inokuba ne-ID yesazisi kunye neentloko ezintsha ezinokutshintsha
I-iPhone sesona sixhobo sinempembelelo ngalo lonke ixesha